Gịnị bụ ezigbo Web Page Obosara? | Martech Zone
Gịnị bụ ezigbo Web Page Obosara?
Monday, June 8, 2009 Fraịdee, June 20, 2014 Douglas Karr
Mepụta saịtị weebụ na ịtọ obosara ibe weebụ ka obosara dị mma bụ mkparịta ụka kwesịrị ịnwe. Ọtụtụ n'ime unu chọpụtara na n'oge na-adịbeghị anya, m gbanwere obosara nke atụmatụ m. M kpaliri obosara peeji ahụ gaa na pikselụ 1048. Fọdụ n'ime unu nwere ike ikwenye na ịgagharị - mana achọrọ m ịkekọrịta ụfọdụ stats na ihe kpatara m jiri mee ka obosara isiokwu ahụ saa mbara.
1048 pikselụ abụghị akara aghara, ezie.
Enwere mmetụta dị mkpa na ịgbasa obosara m:
Youtube na-enye ọkwa buru ibu ugbu a. Ọ bụrụ na ị pịa obere gia na sidebar nke vidiyo vidiyo Youtube, a na-enye gị nhọrọ maka oke nha yana isiokwu ahụ. Ebe ọ bụ na vidiyo ndị dị elu na-aghọ ebe nkịtị na Youtube, Achọrọ m itinye vidiyo ndị ahụ na blọọgụ m ma gosipụta ha nkọwa zuru oke dịka m nwere ike (na-enweghị iri obosara peeji niile).
Ahụkarị mgbasa ozi na-abịa na obosara nke 125, 250 na 300 pixel widths. Ihe pikselụ 300 dị ka ọ na-apụtawanye na ntanetị na saịtị mgbasa ozi mgbasa ozi ma achọrọ m itinye ha nke ọma na akụkụ m.
Ma n'ezie, enwere ụfọdụ padding n'aka ekpe na aka nri nke ibe ahụ, ọdịnaya, na akụkụ ahụ… ya mere nọmba anwansi ahụ bụ pikselụ 1048 maka isiokwu m:
Enwere m nyocha ọnụ ọgụgụ ndị na-agụ m?
Ee n'ezie! Ọ bụrụ na ọtụtụ n'ime ndị ọbịa m na-agba ọsọ ihu ala, m ga-enwerịrị echiche nke abụọ gbasara ịgbasa ibe m.
Mgbe emeputara mkpebi ihuenyo site na ngwugwu nchịkọta m (Na Google ọ bụ ndị ọbịa> Ike Nchọgharị> Mkpebi ihuenyo), m wuru mpempe akwụkwọ Excel nke nsonaazụ ma mepee obosara site na mkpebi ahụ.
Google nyere mkpebi dị ka 1600 × 1200, yabụ ịkwesịrị iwere ihe niile n'aka ekpe nke "x", mụbaa ya 1 ka ọ bụrụ nsonaazụ ọnụọgụ ka ị nwee ike idozi ịgbadata na ya, mee SUMIF wee hụ ole nleta karịrị ma ọ bụ pere mpe karịa obosara imewe ị na-ele.
= Ekpe (A2, chọta ("x", A2,1) -1) * 1
M hapụrụ 22% nke ndị na-agụ akwụkwọ ndị na-agba obere mkpebi? Ọ bụghị n'ezie! Ihe dị mma gbasara okirikiri nhọrọ ukwuu na aka ekpe gị na akụkụ aka nri gị bụ na ị nwere ike ijide n'aka na ọdịnaya gị ka dị n'obosara nke ọtụtụ ndị na-eme nchọgharị. Na nke a, 99% nke ndị na - agụ akwụkwọ m na - agba ọsọ karịa pọdels 640 n’obosara, yabụ adị m mma! Achọghị m ka ha tufuo kpamkpam akụkụ ahụ, mana nke ahụ bụ nke abụọ na ọdịnaya ahụ.
Tags: okwaakpaakaChrisVanakpọ oyiozi emailUkegbulinkedin mgbasa oziazụlite mkpọsaire crmnyocha ahịaakpaaka ahịa ahịaelekọta mmadụ mgbasa ozi
Bing Na Na Na!
Kedu ihe bụ ROI na isi ọwụwa?
Jun 8, 2009 na 7:20 AM
M na-atụ aro nhazi ngwakọ na obosara akpa CSS nke 100%. Ọ bụrụhaala na inwere obosara edoziri maka sidebar, nkụnye eji isi mee, n'okpuru, na isi ọdịnaya ga-edozi iji dabara obosara ihuenyo ahụ. Mejupụtara 100% nke windo ihe nchọgharị onye ọ bụla, n'agbanyeghị mkpebi nyocha nke onye ọrụ. Mgbe ahụ ịgaghị agụ pikselụ ọ bụla ọzọ ma ọ bụ na-esochi nke onye ọrụ ọnụ ọgụgụ banyere ileba anya mkpebi.
Jun 8, 2009 na 12: 22 PM
Enwere m mmasị na nhazi ngwakọ, Bob - mana ọ dị nwute na ha anaghị egwu egwu mgbe ụfọdụ na ọdịnaya ahụ. Enwere ike m dị umengwụ, mana ọ dịrị m mfe ịmara na max na min bụ 640px na saịtị m. Retgbatị esiri ike ịtụrụ ime mgbe m na-ede ederede.
Naanị ihe m chọrọ ka m chere!
Jun 8, 2009 na 12: 17 PM
N'ikpeazụ, ekwenyere m na nkwubi okwu gị, mana ọ bụrụ na m na-eji ntọala obosara edozi, ana m agbatị obosara na pikselụ 960.
Otu nwere ike ị zaa maka ogwe mpịakọta vetikal na ogwe ụzọ mkpirisi ihe nchọgharị ndị ọzọ ga-ewe obosara. Site n'ịnọgide na pikselụ 960, a na-emesi mmadụ obi ike na ọ dịghị mpịgharị aka nri aka ekpe na mkpebi ihuenyo ihuenyo 1024 pixel.
Daalụ maka post a Doug. Ana m arụ ọrụ na nhazi ọhụụ (sara mbara) maka Bọọgụ Indiana Insider na post a bu ihe m choro!
Jul 13, 2009 na 4: 35 AM
dị nnọọ njọ. Na Firefox, saịtị gị nwere ihe ngosi horiz na 1048, ọ nweghịkwa anya dị ọcha ruo mgbe ị ga-aga 1090.
Daalụ maka nnukwu stats ọ bụ ezie na mkpebi Google
Sep 2, 2009 na 3:03 PM
Ebe obu na inwere nke gi setịpụrụ na 1048px, saịtị gị na-akpata ogwe akwụkwọ mpịakọta kwụ ọtọ na ihuenyo 1024. Echere m na ọ ga-aka mma ịhapụ 100px n'obosara (na padding) nke akụkụ gị na mpaghara ọdịnaya ka ọ dabara na 728 × 1024. Nke ahụ bụ omume kacha mma taa.
Naanị otu ikpe megide nke a ga - abụ ma ọ bụrụ na ọnụọgụ nchịkọta na - akwado ya… mana ebe ọ bụ na ị nyeghị data ahụ n'isiokwu gị, m ga - asị na ị mepụtara peeji nke ezighi ezi.
Nov 24, 2009 na 12:51 AM
Anọ m ugbu a na nyocha 15 'na mkpebi 1024 × 768, ahụrụ m mmanya kwụ ọtọ, akpọrọ m ya asị.
Feb 28, 2012 n’elekere 10:36 nke abali
Ọ bụghị onye ọ bụla na-eji windo ọ bụla na ihuenyo zuru oke - n'eziokwu, m ga-achọ ịgba ole na ole na-eme.
Enwere m blọgụ gị na 80% windo… na ebe ahụ ka ọ dị, ogwe akwụkwọ mpịakọta kwụ ọtọ
Ma ihe dị na ihuenyo… na-ahapụ ịhụ… ihe ọ bụla.
Yabụ ogwe mpịakọta gị enweghị isi.
Otu ụzọ dị mfe ịhapụ ndị na-agụ !!
Feb 28, 2012 na 1:49 PM
Ihe di n'ime ya bu na peeji nke @ heenan73: disqus, n'enye onye na agu ihe ihe choro. Ọ bụrụ na m na - efunahụ ndị na - agụ akwụkwọ maka na ha nwere ike ihu ọdịnaya ahụ ma hụ ihe na - agagharị agagharị… na - amaghị na ha bụ ndị na - agụ akwụkwọ m na - achọ Enwere ihe pụrụ iche n’ime ọdịnaya anyị nke na-akwaga ya na 1217px ka m wee soro ya wee dozie ya. Edere post a n'ezie banyere isiokwu gara aga. Daalụ maka iwebata m ntị!